Lego CITY 60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - Brick Fanatics
21 / 07 / 2021 03 / 08 / 2021 Kat 417 Views စာ0မှတ်ချက် 2021, 60302 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစစ်ဆင်ရေး, 60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း, City, လင်းယုန်ငှက်, ဆင်, Lego, Lego တိရိစ္ဆာန်များ, Lego CIty, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, LEGO.com, ခြင်္သေ့သည်, reviews, အဆိုပါ LEGO Group, အဆိုပါ Lego ရုပ်ရှင်
သေတ္တာအသစ်တွင်တိရစ္ဆာန်အသစ်များလုံးဝမရှိသဖြင့်၊ 60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း သွေးဆောင်မှုနဲ့တူတယ် Lego CITY စက္ကူပေါ်မှာအထုပ် - ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုဒီပြန့်ပွား set ကိုအုတ်များနှင့်အတူတက် stack သလဲ?
Lego CITY ဒီနွေရာသီမှာအာဖရိကဆာဗားနားလွင်ပြင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာနေတာပါ။ တိရိစ္ဆာန်များကိုကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းများကိုအဓိကထားပြီး၊ ဤအစုများသည်ရွက်ပေါက်နေသောသဘာဝထိန်းသိမ်းရေးသမားများ၊
ဒီလှိုင်း၏အဓိကလုပ်ငန်းအစုအဖြစ်, 60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသင့်သည်၊ အထူးသဖြင့်ဆင်အရွယ်အစားတန်ဘိုးတန်သလောက်စဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်း။ တိရိစ္ဆာန်မှိုအသစ်များအစား၎င်းထက်မကရှိပါသလော။
theme: Lego CITY အမည်သတ်မှတ်မည် - 60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ဖြန့်ချိ: ဇြန္လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 89.99 / $ 99.99 / € 99.99 အပိုင်းပိုင်း: 503 အသေးစားပုံများ: 6
60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ဒါကြောင့်တစ် ဦး မှကြွလာသောအခါစတိုင်တော်တော်လေးပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ပါတယ် Lego တ ဦး တည်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိအဖြစ် set ကိုarticular ဒြပ်စင်။ အဲဒီမှာ Mini-builds မျိုးစုံရှိပါတယ်art ဒီမော်ဒယ်နှင့်အတူသင်တကယ်တက်သည်။ အခန်းတိုင်းတွင်ကိုယ်ပိုင်လမ်းညွှန်စာအုပ်ငယ်ရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာနံပါတ်များအိတ်များကိုလိုက်နာခြင်းသည်အမှန်တကယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်လွတ်လပ်မှုဆိုင်ရာအချို့သောအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကိုပေးသည်။ ထို့အပြင်တိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူအိတ်ထဲသို့သင်ခုန်နိုင်ရုံသာမကဤ set ၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
'rescue' ခေါင်းစဉ်တွင်ဖော်ပြထားသောကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးယာဉ်များနှင့် st ပစ္စည်းများရှိရန်လိုအပ်သည်art သေးငယ်တဲ့လေယာဉ်ပျံနှင့်အတူသေးငယ်တဲ့။ ထောင့်နှင့် p2နှင့် 8 × XNUMX ပန်းကန်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်artတောင်ပံများအတွက်ဆိုလျှင်၎င်းသည်စွန်ပလွံအရွယ်ရှိသော်လည်းချက်ချင်းမှတ်မိနိုင်သည်။ မော်တော်ယာဉ်အားလုံးနီးပါးတွင်2×2ကွေးကောက်ပြားများရှိပြီးတိရိစ္ဆာန်များကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေကိုကြေငြာသောပုံနှိပ်ထားသော paw-print တံဆိပ်ပါသောအခင်းများရှိသည်။ ပိုမိုကြမ်းတမ်းသောမြေပြင်အနေအထားအတွက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်မြင်းစီးသူရဲတွင်က Lego ပူးတွဲပါကျောက်သားထပ်တွင်မီးတောက်မီးလျှံကစားခြင်းလက္ခဏာကိုတိုက်ဖျက်ရန်မီးသတ်ဆေးဘူး။
၎င်းသည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပင် ၆၀၃၀၇ ရရှိသည်။ မော်တော်ယာဉ်များကိုဘီးသို့မဟုတ်လှည့်ပတ်သွားနိုင်သည်။ အဓိကစခန်းတွင်သရုပ်ဆောင်ရန်အားပေးသည့်အခြေခံthere'sရိယာအချို့ရှိသည်။ တိရိစ္ဆာန်များမှကယ်ဆယ်ရန်အတိအကျသိပ်မရှိပါဘူး။
ဒီရိုးရှင်းသော၏ပြီးပြည့်စုံသောဥပမာcity ခြင်္သေ့တွင်းသည် Big Ugly Rock Pieces (BURPs) နှင့်ပေါင်းစပ်။ အမိုးအုတ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သားပေါက်များပင်လျှင်တင်းကျပ်စွာညှစ်နေသောကြောင့်၎င်းသည်အတွင်း၌နေရာလွတ်သာဖြစ်သည်။ သစ်ရွက်အပိုင်းအစများသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များမှ၎င်းသည် ပို၍ အော်ဂဲနစ်ဖြစ်စေရန်မည်သည့်အရာမှမဆိုအကျိုးများစွာရရှိခဲ့သည်။
Bonsai သစ်ပင်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျောက်မျက်နှာပြင်မှမည်သို့ကြီးထွားလာသည်ကိုလိမ္မာပါးနပ်သော်လည်း၎င်းသည်ချောမွေ့သော cylindrical ပင်စည်နှင့်သစ်ရွက်ဒြပ်စင်အနည်းငယ်နှင့်မပြီးဆုံးသေးပါ။ အီးမရှိဘူးxtra ပန်းပွင့်သို့မဟုတ်တစ် ဦး နှင့်တူအသေးစိတ် Lego ပင့်ကူသည်အကိုင်းအခက်မှသည်။ ကြက်ဥထိပ်ပေါ်တွင်ကြက်ညှာညှပ်စွာထားခြင်းသည်များစွာမဖြစ်စေပါ။ အထူးသဖြင့်ကြင်ဖော်မဲ့လင်းယုန်သာဖြစ်သည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အကောင်းဆုံး partဒီအစု၏ s ကိုကယ်ဆယ်ရေးထရပ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ၁၆ လုံးကျော်သောရှည်လျားသောကြောင့်၎င်းသည်သိသိသာသာရှိပြီးခိုင်ခံ့မြဲမြံပြီး Savannah ပတ် ၀ န်းကျင်သို့ခရီးသွားခြင်းသို့မဟုတ် room ည့်ခန်းကိုရှာဖွေခြင်းတို့အတွက်လုံလောက်သည်။ အနီရောင်ရှိပြားပြားအမျိုးမျိုးသည်ကိုယ်ထည်ကိုတည်ဆောက်သည်။ အလင်းရောင်အညိုရောင်အုတ်များသည် cabin ကိုဖန်တီးကြပြီးအရောင်နှစ်မျိုးလုံးအတူတကွကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အတွင်းပိုင်းအဖြူရောင်အကြွပ်ပေါ်တွင်ကွန်ပျူတာနှင့်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သောဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုသို့သန့်ရှင်းသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာခံစားမှုပေးသည်။ လေးပိုင်းသာပြုလုပ်ထားသောအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးသည်မျက်လုံးအပိုင်းအစအတွက်သေးငယ်သောမှန်ဘီလူးကိုအသုံးပြုသည်။
ဤအရာအားလုံးကိုအတူတကွပေါင်းစည်းရန်ကြိုးစားခြင်းသည် ၂၀၂၁ အသစ်အတွက်ရေဒြပ်စင်ကြွေပြားကိုလိမ္မာပါးနပ်စွာချိတ်ဆက်ထားသည့်အဓိကစခန်းဖြစ်သည်။ ၈ × ၈ စက်ဝိုင်းပြား ၂ ခုသည်ချိတ်ဆက်နေသောသစ်ပင်များအတွက်အုတ်မြစ်များကိုပံ့ပိုးပေးသည်။ ၎င်းသည်ကယ်ဆယ်ရေးယာဉ်အတွက်နောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်လှေခါးထစ်ပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော်လည်းလိုအပ်သောအရောင်မျိုးစုံဖြည့်စွက်ထားသည်။
ထိုမှတစ်ဆင့်သစ်ပင်အိမ်များသည်ခိုင်ခံ့သောအထောက်အပံ့များပေးသောမကြာသေးမီကမိတ်ဆက်ခဲ့သောသစ်ပင်ပင်စည်ဒြပ်စင်များကို အသုံးပြု၍ အထက်သို့တည်ဆောက်သည်။ သစ်ပင်ပေါ်ရှိရိန်းကိုရပ်နားရန်နေရာ (သို့) ဒီဇိုင်းသမားများသာသိသည့်တဲတစ်လုံးပေါ်တွင်ရိန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ထားသဖြင့်အခြေအနေများနည်းနည်းထူးဆန်းသည်။ ၎င်းသည်ထူးဆန်းနေပြီးကစားခြင်းတန်ဖိုးကိုမထည့်သွင်းနိုင်ပါ။ ကံမကောင်းစွာပဲဒီအဖြစ်, အခြားဘက်ခြမ်းမှဆက်လက် နည်းပညာ ချည်များနှင့်ဘောလုံး - အဆစ်များသည်ယိုယွင်းနေသောအဖြူရောင်ဒြပ်ထုများ၏ဒြပ်ထုနှင့်အတူထည်စိုစွတ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ တိရိစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောအစုတခုအတွက်စခန်းကိုပြုလုပ်ရန်သစ်တောပြုန်းတီးမှုများစွာရှိသည်။
60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း အဘယ်သူမျှမကဒီအစုံမှထူးခြားသောသော်လည်း, တစ် ဦး အထင်ကြီးခြောက်လအသေးစားနှင့်အတူပါရှိသည်။ Rangers ငါး ဦး သည်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ depending ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသော torsos များရှိပြီးလေယာဉ်မှူးဂျာကင်အင်္ကျီပေါ်တွင်အသေးစိတ်ပုံနှိပ်ခြင်းမှသည်ကျန်အဖွဲ့အားလုံး၏လက်တွေ့ကျသောအိတ်ကပ်များအထိဖြစ်သည်။ VET ဒီဇိုင်းကိုအခြားအစုတစ်ခုတွင်သာရရှိနိုင်သည်။ 60302 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစစ်ဆင်ရေးစိမ်းပြာရောင်လက်များသည်စမတ်လက်အိတ်များကိုတုပပြီးသူမအားပွတ်တိုက်များကို stethoscope ဖြင့်ပုံနှိပ်ထားသည်။ သူမသည်လှပသောအရောင်ခြယ်ထားသည့်ပုံစံဖြင့်လှပစွာပုံစံချထားသောဆံပင်ပုံစံအသစ်ကိုလည်းသူမအားကစားရှိသည်။
ဒါကလူသားတွေပဲ၊ တိရစ္ဆာန်ဇာတ်ကောင်တွေကပိုကောင်းတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာဒီလှိုင်း CITY အစုံများကိုပထမ ဦး ဆုံးကြေငြာခဲ့သည်၊ အသစ်သောတိရိစ္ဆာန်မှိုများသည်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအများဆုံးဖြစ်စေသောအရာများဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့၏ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကြောက်ရွံ့မှုအချို့ရှိသည် artနေပြည်တော်။ စဉ်းစားထားသည့်အရာ၊ Lego တကယ်ကောင်းစွာကျက်သရေနှင့် poseability ။
ခြင်္သေ့နှင့်ခြင်္သေ့နှစ်ကောင်လုံးတွင် ဦး ခေါင်းများရှိပြီးတင်ပါးဆုံရိုးများနှင့်နောက်ဖက်ကိုနောက်ကျောအထိရှိသည်။ မျောက်လေးများသည်ငြိမ်နေနိုင်သည်၊ သို့သော်သူတို့၏ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းသောမျက်နှာသည်၎င်းအတွက်လုပ်ပေးရုံထက်မကပိုပုံနှိပ်သည်။ ထူးခြားသောပါဝင်မှုတစ်ခုမှာအနီရောင်နှုတ်သီးနှင့်သံချေးတက်သည့်အမွေးအတောင်နှင့်ပြည့်စုံစွာပုံနှိပ်ထားသောအာဖရိကန်လင်းယုန်လင်းယုန် (ဟုတ်သည်၊ အမှန်ပင်ငှက်တစ်ကောင်) ဖြစ်သည်။ ဆင်သည်၎င်းတို့အားလုံး၏အနည်းဆုံးပုံရိပ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ခေါင်းသည်ဘောလုံး - အဆစ်ပေါ်တွင်ရှိနေသောကြောင့်၎င်းကိုswရာမပုံသဏ္someာန်အမျိုးမျိုးဖြင့်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
အတွက်အကြီးမားဆုံးအစုံအဖြစ် Lego CITY နွေရာသီလှိုင်း, 60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း တစ်ကြီးမားကျယ်ပြ£ 89.99 / $ 99.99 / € 99.99 မှာလာပါတယ်။ ယခုဤအစုသည်ကြီးမားနေပုံရပြီးသီးခြားဒြပ်စင်အားလုံးသည်ပြန့်ကျဲနေသောပြသမှုအတွက်ဖြစ်စေသည်၊ သို့သော်အပိုင်း ၅၀၀ ကျော်သာရှိသည်။ နံပါတ်အနည်းငယ် crunching နှင့်အတူ, p မဟုတ်သောအပိုင်းအစနှုန်း 500p နှုန်းမှာထွက်အလုပ်လုပ်တယ်articularly ကောင်းသောတန်ဖိုးကို။ ဤမြင့်မားသောစျေးနှုန်းအချက်သည်တိရိစ္ဆာန်မှိုအသစ်များကိုတီထွင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်ဤမျှတမှုဖြင့်ပင်အစုံသည်အနည်းဆုံးပေါင် ၂၅ / ဒေါ်လာ ၃၀ / ယူရို ၃၀ ဖြင့်အလွန်အမင်းစျေးကြီးနေဆဲဖြစ်သည်။
အဓိကပြproblemsနာနှစ်ခုရှိပါတယ် 60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း။ တစ်ခုမှာ၎င်းသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအာရုံမစိုက်နိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ပြတ်ပြတ်သားသားဖြစ်သွားစေနိုင်သည်။ အများအားဖြင့်aLego မော်ဒယ်တွင်နောက်ကွယ်မှဇာတ်ကြောင်းအချို့ရှိသည်၊ ၎င်းသည်မသိသာသော်လည်းအခန်းကဏ္ play သရုပ်ဖော်ခြင်းကိုအားပေးလိမ့်မည်။ ဒီအစုံမှာအဲဒီမှာမရှိဘူး၊ ဒါကကစားချင်တဲ့လူငယ်ပရိသတ်တွေရှုပ်ထွေးသွားစေနိုင်တယ်။ ပါ ၀ င်သည့်ယာဉ်များနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအားမှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက်အချို့ ပေး၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အခြားအစုတစ်ခုနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားရသည်။
အခြားပြissueနာမှာသေတ္တာ၏အသက်အပိုင်းအခြားဖြစ်သည်။ Lego အသက်အပိုင်းအခြားများမှာ (The кыска၌ဖော်ပြထားသည်) Lego Movie), နှင့်မည်သူမဆို box ကိုအပေါ်ဘာပဲပြောပြောနေပါစေသူတို့လုပ်ဖို့ယုံကြည်မှုခံစားရသည်အတိုင်း, set ကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် 6+ ရည်မှန်းချက်ကြီးပုံရသည်။ ၎င်းသည်လူငယ်ပရိသတ်အတွက်တည်ဆောက်စရာများစွာဖြစ်ပြီး၊arts ။ ငယ်ရွယ်သောတည်ဆောက်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်လည်း၎င်းအတွက်အာရုံစိုက်ရန်သက်တမ်းကုန်ဆုံးလိမ့်မည်ဟုလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ထို့ကြောင့်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲသို့ကျရောက်ခဲ့သည်။ လူငယ်ပရိသတ်တစ် ဦး အတွက်အလွန်များသော်လည်းသေးငယ်သည့်ပရိသတ်များအတွက်အမှန်တကယ်ပျော်မွေ့ရန်မလုံလောက်သေးပါ။ ကံမကောင်းစွာပဲသီးခြားဒြပ်စင်အားလုံးအတူတကွမလာကြဘူး, 500 အပိုင်းပိုင်းဒီတစ်ခုဆွဲဆောင်မှုအစုံဖြစ်စေခြင်းငှါမလုံလောက်။ အကယ်၍ သင်သည်တိရစ္ဆာန်ပုံသဏ္ဌာန်အသစ်များနောက်တွင်ရှိနေပါကသင်သည်ဤလှိုင်းမှသေးငယ်သောအရာများကိုရှာဖွေခြင်းသို့မဟုတ်ဤရောင်းချမှုကိုစောင့်နေရန်ပိုကောင်းသည်။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ကောက်နေခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego CITY ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဆိုတ ဦး တည်းကိုအသုံးပြုပြီးအစုံ တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
LEGO တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ CITY 60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း?
60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးအခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ရန်အနည်းဆုံးတစ်နာရီခွဲခွဲကြာမည်။ ဒြပ်စင်တစ်ခုစီသည်နံပါတ်ခြောက်အိတ်များဖြင့်ပျံ့နှံ့နေသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ချစ်စရာကောင်းသောကိန်းဂဏန်းများကြောင့်အာရုံပျံ့လွင့်ပါက ပို၍ ကြာလိမ့်မည်။
Lego ထဲမှာဘယ်လောက်အပိုင်းအစတွေရှိလဲ CITY 60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း?
503 အပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ် 60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဒီအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဒီစျေးနှုန်းအကွာအဝေးအစုတခုဘို့မျှော်မှန်းထားသည်ထက်နည်းပါးလာသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအသေးစားဓာတ်ပုံများ၊ ခြင်္သေ့နှစ်ကောင်၊ ခြင်္သေ့နှစ်ကောင်၊ လင်းယုန်၊ ဆင်နှင့်လင်းယုန်ပုံများလည်းရှိသည်။
Lego ဘယ်လောက်ကြီးလဲ CITY 60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း?
၎င်းသည်ဒြပ်စင်တစ်ခုစီ၏အရွယ်အစားကွဲပြားသောကြောင့်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသည်။ သို့သော်ပင်စည်ပင်စခန်းသည် ၂၆ စင်တီမီတာ၊ အမြင့် ၁၆ စင်တီမီတာနှင့်အကျယ် ၆.၅ စင်တီမီတာရှိသည်။ အခန်းတစ်ခုလုံးသည်အခန်းများစွာကိုမယူနိုင်သော်လည်းသရုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကော်ဇောတစ်လျှောက်ပျံ့နှံ့ရန်လုံလောက်သည်။
Lego ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ CITY 60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကုန်ကျပါသလား
၎င်းသည်အပိုင်း ၅၀၀ ကျော်သာရှိသည်ဟုယူဆလျှင်၊ \_ t 60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ဈေးအကြီးဆုံးပါ Lego CITY £ 89.99 / $ 99.99 / € 99.99 မှာနွေရာသီလှိုင်းကနေသတ်မှတ်ထားသည်။ ဤစျေးနှုန်းသည်တိရိစ္ဆာန်မှိုအသစ်များကိုတီထွင်ခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အခြားထံမှလျှော့စျေးကိုစောင့်နေရဆဲဖြစ်သည် Lego ရောင်းသူများသို့မဟုတ်အနည်းဆုံး VIP အချက်နှစ်ဆရှိသည်။
← LEGO အပန်းဖြေအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် Marvelအနက်ရောင်မုဆိုးမနောက်တွဲယာဉ်
LEGO Super Mario Peach ၏ရဲတိုက်လိုအပ်သောအရာခြောက်ခု →